कला-प्रबिधि – DhankutaKhabar
गुगलमा यि ५ चिज कहिल्यै नखोज्नुस : जेल सजाय हुनसक्छ !
एजेन्सी – गुगल संसारकै सबेभन्दा ठुलाे सर्च इन्जिन हाे । गुगलकै सहायताले तपाइ हामी जस्ताेसुकै कुराहरूकाेपनि खाेजी गर्न सक्छाै या अाफुले चाहेकाे बस्तुहरू सजिलै खाेजी गरी वा हेर्न सक्छाै तर … Read More... चराका तीस चित्र बिक्री
काठमाडौँ, १ माघ । हिरालाल डङ्गोल र उहाँको परिवारको ‘नेपालका चराहरू’ शीर्षकमा आयोजित चित्रकला प्रदर्शनीमा ३० चित्र बिक्री भएका छन् । प्रदर्शनी करिब पाँच हजार दर्शकले अवलोकन गरेको कलाकार ईश्वर … Read More... सुबिसु क्यान इन्फोटेक माघ १३ देखि
काठमाडौँ, २८ पुस । सुबिसु क्यान इन्फोटेक–२०१७ आगामी माघ १३ देखि १८ गतेसम्म राजधानीको भृकुटीमण्डपमा हुने भएको छ । क्यान महासङ्घले बुधबार यहाँ आयोजना गरेको पत्रकारसम्मेलनमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी दुईसय … Read More... खानी तथा खनिज उत्खननका लागि थप कानुन बनाइँदै
काठमाडौँ, १९ पुस । सरकारले खानी तथा खनिज पदार्थको उत्खनन र उपयोगसम्बन्धी आवश्यक नयाँ कानुनको तर्जुमा एवम् विद्यमान कानुनमा परिमार्जन गर्न सुरु गरेको छ । मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि खानी … Read More... गोरखाको स्वाँरामा पहराभित्र ठूलो परिमाणमा विस्फोटक पदार्थ भेटियो (फोटोसहित)
गोरखा, १८ पुस । गोरखाको स्वाँरा गाविस–९ स्थित थलाको जङ्गलभित्र ओडारमा ढुङ्गाले छोपेर लुकाइराखेको अवस्थामा ठूलो परिमाणमा विस्फोटक पदार्थ फेला परेको छ । बाख्रा चराउन आइतबार दिउँसो जङ्गल पुगेका स्वाँराका … Read More... टेलिकमको फोर जी कसरी चलाउने ? जान्नै पर्ने ७ कुरा
१७, पुस । नेपाल टेलिकमले आइतबार चौथो पुस्ताको मोबाइल इन्टरनेट सेवा 4G लन्च गरेको छ । हाल यो सेवा काठमाडौं र पोखरामा मात्र उपलब्ध हुनेछ । टेलिकमको 4G कसरी चलाउने … Read More... मुस्ताङमा वायु ऊर्जाको परीक्षण हुँदै
(रमेश लम्साल) काठमाडौँ, १ पुस । मुस्ताङको कागबेनीमा परीक्षणको रुपमा एक मेगावाट क्षमताको वायु ऊर्जा प्रणाली जडान हुने भएको छ । नेपालको ‘एभरेष्ट बिन इनर्जी’ प्राली र दक्षिण अफ्रिकाको ‘एभरेडी … Read More... Posts navigation